Bokin' i Nahoma - Wikipedia
Bokin' i Nahoma
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Nahoma)
Ny Bokin'i Nahoma dia boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana voasoratra tamin’ny taonjato faha-7 tao Jerosalema. Ao amin’ity boky ity ny mpaminany Nahoma dia manambara ny hitsarana sy ny hanamelohana an’ i Ninive renivohitr’ i Asiria (na Asora) noho ny fangejany ireo firenen-kafa. Maneho anefa i Nahoma fa Andriamanitra hamindra fo amin’ izay miverina aminy. Fanehoan’ Andriamanitra ny famindram-pony amin’ny olona ny fanasaziana ny fahavalony sy ny famotsorany ny vahoakany ho afaka amin’ny fifehezan’ ny fahavalony. Vitan’ Andriamanitra izany satria izy no mpanapaka ny tany rehetra.
3.1 Ny voninahitra sy ny herin'i Iahveh Andriamanitra (1.1 – 2.1)
3.2 Faminaniana ny amin'ny haharavan’i Ninive (2.1 – 3.19)
I Nahoma no nanoratra ny Bokin’ i Nahoma. Mpaminany avy ao Alkosy any Galilea izy. Taloha kelin’ny nandravana an’i Ninive (612 tal. J.K.) no nivoahan’ny faminanian’i Nahoma ary voasoratra teo anelanelan’ny taona 642 sy 606 tal. J.K. ny boky mitondra ny anarany.
Isan’ireo atao hoe Mpaminany madinika roa ambin’ny folo izay zana-bondron’ny Bokin'ny mpaminany ny Bokin’i Nahoma ao amin’ny Baiboly kristiana fa sokajin’ireo Mpaminany taoriana izay zana-bondron’ny Nevi'im ("Mpaminany") izy ao amin’ny Tanakh.
Amin'ny teny hebreo dia atao hoe ספר נַחוּם / Sefer Nakhûm ny Bokin'i Nahoma. Ao amin'ny Septoajinta amin'ny teny grika izy dia atao hoe Ναούμ Ζʹ / VII Naoúm (ny zeta Ζʹ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana fahafito azy).
Azo zaraina roa toy izao ny Bokin’i Nahoma :
Ny voninahitra sy ny herin'i Iahveh Andriamanitra (1.1 – 2.1)Hanova
Ny fahatezeran’i Iahveh (1.1 – 2.1)
Faminaniam-pitsarana an’i Joda (1.9 – 1.15)
Faminaniana ny amin'ny haharavan’i Ninive (2.1 – 3.19)Hanova
Ho rava i Ninive (2.1 – 2.13)
Hovaliana ny fahotan’i Ninive (3.1 – 3.7)
Voatombokase ny amin’ny Ninive (3.8 – 3.19)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Nahoma&oldid=1041930"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 06:02
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 06:02 ity pejy ity.